Akụkọ - Mkpa nke Nhazi
Mkpa nke Nhazi
Uru ndị ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ:
1. Nhọrọ ọnụahịa: ndị ahịa nwere ike ịhazi ụdị n'ụdị ọnụahịa kwekọrọ na ndị na-azụ ha, ka ha wee nwee ike ịghọta ohere ohere.
2. Nhọrọ nke akwa: omenala nwere ike ịhọrọ ma jiri nwayọ họrọ akwa eji akwa ahụ, dịka ọnọdụ nke ha si ahọrọ akwa achọrọ, a ga-enweta ihe dị iche iche a chọrọ akwa, chọọ inweta ụfọdụ mmetụta nke uwe, nwere ike ịbụ Egosiri site na akwa!
3. Nhọrọ nke agba: agba nwekwara ike ijikọta ihe ndị na-ewu ewu n'oge, dị ka njirimara dị iche iche nke ụdị ahụ, họrọ ụdị ejiji, nke dabara adaba maka ụdị akwa a.
4. Nhọrọ ụdị: ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara, yana nwekwara ike ịhazi ụdị dịka mkpa ndị ahịa si dị. Onye mmebe ahụ ga-ekwurita onye ahịa ya, ghọta echiche onye ahịa ya nke ọma wee meziwanye ihe osise ahụ, rue mgbe uwe ahụ ga-adị. N'ime usoro a, onye mmebe ga-agbasi mbọ ike maka ihe ọhụrụ na nkọwa, iji gosipụta ụdị dị iche iche na ejiji. Ọnọdụ a nke nnwere onwe ọrụ dịtụ nnukwu, ndị ahịa nwere ike ịnweta ụdị ọkacha mmasị ha. N'otu oge ahụ, ruo n'ókè kachasị iji zere ịmeghachi ụdị na ahịa, afọ ojuju ga-adị elu.
5. typedị ụdị nhọrọ: ụdị uwe dị iche iche dị na nsụgharị ahụ ga-enwe nnukwu esemokwu, iji gosipụta uwe na-eyi uwe, mbipụta mbipụta ọkachamara na ihe ịga nke ọma mbụ ga-dabere na nsonaazụ na-aga n'ihu na-agba mbọ idozi nsụgharị ahụ oge ọ bụla, iji hụ na nhazi uwe ahụ ziri ezi kpamkpam, iji mezuo ezigbo ejiji. E jiri ya tụnyere uwe ndị dị na ahịa, ụdị na usoro a na-eme dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị karịa na nka na ụdị kpochapụwo, nke nwere ike zute ahịa.